Iindaba -Uphando luthi imakethi yemodyuli ebonakalayo iza kudlula kwi-USD17.7 yezigidigidi ngo-2025, ngegalelo elikhulu kumaziko edatha
"Ubungakanani bemakethi yeemodyuli ezibonakalayo zifikelela kwi-USD7.7 yezigidigidi kwi-2019, kwaye kulindeleke ukuba iphindaphindwe kabini ukuya kwi-USD17.7 yezigidigidi ngo-2025, nge-CAGR (izinga lokukhula lonyaka) le-15% ukusuka ngo-2019 ukuya ku-2025. ” Umhlalutyi we-YoleD & Veloppement (Yole) uMartin Vallo uthe: "Oku kukhula kuye kwaxhamla kubaqhubi beenkonzo ezinkulu zefu abaqala ukusebenzisa izixa ezikhulu zexabiso eliphezulu (kubandakanya i-400G kunye ne-800G) iimodyuli. Ukongeza, abasebenzisa umnxeba bakwandisile ukutyala imali kwiinethiwekhi ze5G.
U-Yole uxele ukuba ukusuka kwi-2019 ukuya kwi-2025, imfuno yeemodyuli ezibonakalayo kwimakethi yokunxibelelana kwedatha iya kufezekisa i-CAGR (inqanaba lokukhula konyaka) malunga ne-20%. Kwimarike yoqhakamshelwano, iya kufezekisa i-CAGR (inqanaba lokukhula konyaka) malunga ne-5%. Ukongeza, nefuthe lobhubhane, ingeniso iyonke kulindeleke ukuba inyuke ngokuphakathi kwi-2020. Ngapha koko, i-COVID-19 ichaphazele ngokwendalo ukuthengiswa kweemodyuli ezibonakalayo zehlabathi. Nangona kunjalo, siqhutywa sisicwangciso sokuhanjiswa kwe-5G kunye nophuhliso lwedatha yedatha, ibango leemodyuli ezibonakalayo zinamandla kakhulu.
Ngokuka-Pars Mukish, umhlalutyi wase-Yole: "Kule minyaka ingama-25 idlulileyo, uphuhliso lwetekhnoloji yoqhakamshelwano lwefayibha lwenze inkqubela phambili enkulu. Ngama-1990, ubuninzi beekhonkco zentengiso ye-fiber fiber yayiyi-2.5-10Gb / s kuphela, kwaye ngoku isantya sabo sokuhambisa sinokufikelela kuma-800Gb / s. Uphuhliso kule minyaka ilishumi idlulileyo lwenze ukuba iinkqubo zokunxibelelana zedijithali zisebenze ngempumelelo kwaye zisombulule ingxaki yokupheliswa kwempawu. ”
U-Yole uchaze ukuba ukuvela kweetekhnoloji ezininzi kuncede isantya sokuhambisa umgama omde kunye neenethiwekhi zemetro ukufikelela kwi-400G okanye nangaphezulu. Umkhwa wanamhlanje oya kumaxabiso angama-400G avela kwimfuno zabaqhubi belifu kunxibelelwano lweziko ledatha. Ukongeza, ukukhula okubonakalayo konxibelelwano lwenethiwekhi kunye nenani elonyukayo lamazibuko obuchwephesha banefuthe elikhulu kwitekhnoloji yemodyuli ebonakalayo. Uyilo lwefomathi entsha luya lusiba yinto eqhelekileyo, kwaye ijolise ekunciphiseni ubungakanani bayo, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukusetyenziswa kwamandla. Ngaphakathi kwimodyuli, izixhobo ezibonakalayo kunye neesekethe ezihlanganisiweyo ziya zisondela kwaye zisondela.
Ke ngoko, i-silicon photonics inokuba yeyona teknoloji iphambili kwizisombululo zokunxibelelana kwi-optical elizayo ukujongana nokugcwala kwenani labantu. Obu buchwephesha buza kudlala indima ebalulekileyo kwizicelo ezisusela kwi-500 yeemitha ukuya kwi-80 yeekhilomitha. Umzi mveliso usebenza ukudibanisa i-InP lasers ngokuthe ngqo kwii-silicon chips ukufezekisa ukudityaniswa okungafaniyo. Izibonelelo zalo kukudityaniswa okungathethekiyo kunye nokupheliswa kweendleko kunye nokuntsonkotha kwempahla yokupakisha.
Ugqirha u-Eric Mounier, umhlalutyi wase Yole, uthe: "Ukongeza ekunyuseni izinga ngokusebenzisa i-amplifiers ezihlanganisiweyo, ukufakwa kwedatha ephezulu kunokufezekiswa ngokudibanisa ezona zixhobo zihamba phambili zedigital processing chips, ezibonelela ngetekhnoloji ezahlukeneyo zokumodareyitha, ezinje. njengePAM4 okanye i-QAM. Enye indlela yokunyusa izinga ledatha kukuthelekisa okanye ukuphindaphinda. ”